Sankt Martin Sheet mozika sy lahatsoratra avy amin'ny rhyme garderie ho an'ny fanontam-pirinty
Ny hiran'i Saint Martin - fanamarihana sy lahatsoratra
Saint Martin hira - lahatsoratra
Ny Fetin'i Martin avy amin'ny Tours dia ho amin'ny 11. Nankalazaina tamin'ny volana novambra ary nitovitovy tamin'ny faritra maro. Na izany aza, ny tantaran'i St. Martin sy ny hetsika malaza - mizara ny akanjo - dia manerana izao rehetra izao.
Ny mozika sy ny soratra masina Sankt Martin Lied
Ho an'ny ankizy, ny filaharan'ny St. Martin dia antony iray hanehoana fankalazana amin'ny antony samihafa. Ny fifindrana tahaka izany dia atao any amin'ny firenena eoropeana maro, na dia tsy mitovy hevitra aza ny antsipiriany madinika. Ireo rehetra kosa dia samy mahazatra, ny fihodinana amin'ny latabatra na ny fanilo amin'ny toeram-ponenana. Ireo jiro dia novidina na nokolokoloin'ny kindergarten sy ny ankizy mpianatra.
Eto amin'ity procession ity, ny olona dia miaraka ihany koa miaraka amin'i Martin. Ireo mpandray anjara dia mihira an'i Martinslieder ary miaraka amin'ny tarika.
Ny fanindriana ny sary dia manokatra pejy fanangonana miaraka amin'ny taratasy sy ny soratra amin'ny pdf
Mozika sy soratra amin'ny sainan'i Martin
nitaingin-tsoavaly sy rivotra,
ny soavaly no nitondra azy haingana.
Tonga dia nahazo herim-po i Martin
ny akanjony nanarona azy amim-pitiavana ka nipetraka gut.Im ny oram-panala, nipetraka teo amin'ny oram-panala,
nisy lehilahy mahantra tao anaty lanezy,
tsy nanam-bady, tsy nanana akanjo.
Manampy ahy amin'ny fahoriako aho,
raha tsy izany, dia ny fahafatesana no mangidy.
Nentin'i Saint Martin ny halatra,
ny soavaly nijoro niaraka tamin'ny mahantra,
Saint Martin miaraka amin'ny sabatra
Ny palitao mafana tsy nanamontsana.
Nomen'i Martin ny antsasany,
ny mpangataka dia misaotra azy haingana.
Saingy i Martin Martin dia nandeha haingana
Miala sasatra i Martin
Ao amin'io nofy io dia miditra ny Tompo.
Mitondra akanjo toy ny akanjo izy
ny tarehiny dia mamirapiratra. Sankt Martin, Saint Martin,
Mijery azy mangingina i Saint Martin
Ny Tompo dia mampiseho azy ny lalana.
Mampahafantatra azy any amin'ny fiangonany Izy,
ary i Martin dia maniry ny ho mpianany.
Tonga ho mpisorona i Martin
ary nanompo teo amin'ny alitara izy,
Izany angamba no manala azy any am-pasana,
Farany dia nentiny ilay crosier.
Ry Martinika, oh, lehilahin'Andriamanitra,
Henoy ny fitalahoanay
Mivavaha ho anay amin'izao fotoana izao
ary hitarika antsika ho amin'ny fahasoavana.
Sokafy ny mozika fanasongadin'ny hira Sankt Martin ho toy ny sary mihetsika
Sankt Martin Fest - Fombafomba fa mbola maoderina
Pejy fanangonana Saint Martin Lanterns Moving
Pejy fanolorana Saint Martin / Martinstag
Pejy fanolorana Saint Martin
Pejy fanolorana St. Martin
Asehoy ny tongotrao - marika sy lahatsoratra
Fantatrao ve hoe firy ny kintana mijoro - fanamarihana sy lahatsoratra